မလေးရှားနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်
AAR ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူများ သိရှိစေရန် →
မလေးရှားနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မလေရှားနိုင်ငံတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များကို အဆင့် (၆) ဆင့်ဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ အဆင့်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် (Tier) ဟု ခေါ်၍ ယင်းအဆင့် တစ်ခုစီကို အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဖော်ပြသည်။ Tier6(အဆင့် – ၆) ကို Outstanding ဟု လည်းကောင်း ၊ Tier5(အဆင့် – ၅) ကို Excellent ဟုလည်းကောင်း ၊ Tier4(အဆင့် – ၄) ကို Very Good ဟုလည်းကောင်း ၊ Tier3(အဆင့် – ၃) ကို Satisfactory ဟုလည်းကောင်း ၊ Tier2, Tier 1 ကို Weak ဟု၍လည်းကောင်း အသီးသီး သတ်မှတ်သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် ရေရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာ၍ အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ပေးရေးစနစ် (ဆီတာရာ SETARA) ဌာနမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်၍ စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ပြီး ယင်းစစ်တမ်းအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်တွင် အဆင့်မြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီး ဒါတွတ်ဆရီ မိုဟာမက် ခါလက်နော်ဒင်က ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခဲ့သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အဆင့် (၆) ဝင်သော ကျောင်း လုံးဝ မရှိခဲ့ချေ။ အဆင့် (၅) မှီသော ကျောင်း (၁၈) ကျောင်း ရှိခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် ပြည်သူပိုင်ကျောင်း (၇) ကျောင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကျောင်း (၁၁) ကျောင်း ပါဝင်သည်။ အဆင့် (၄) ကို မှီသောကျောင်း (၂၅) ကျောင်းရှိပြီး ပြည်သူပိုင် (၁၁) ကျောင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် (၁၄) ကျောင်း ဖြစ်သည်။ အဆင့် (၃) မှီသော ကျောင်း (၄) ကျောင်းရှိပြီး အဆင့် (၂) နှင့် အဆင့် (၁) ကျောင်းများ မရှိပေ။
အဆင့် (၅) ရရှိသော ကျောင်းများအနေဖြင့် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ အစိုးရများမှ ကမကထပြုသော ကျောင်းသားများကို လက်ခံရရှိနိုင်ပြီး ယင်းက ထိုကျောင်းများအတွက် မက်လုံးတစ်ခု ဖြစ်လာမည်။ ၎င်းအပြင် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူ၍ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများကို လက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဟု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုမျှသာမက (၁၉၉၆)ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အဆင့်မြင့် ပညာရေး ကျောင်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၅၅၅) အရ အဆင့် (၅) ဝင်သော ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကျောင်းများအနေဖြင့် ဥပဒေစည်းမျဉ်းအချို့မှ ကင်းလွတ်ရရှိကြမည်။ ယင်းကင်းလွတ်ခွင့်များမှာ ယင်း ကျောင်းများအနေဖြင့် နည်းပြဆရာများ ခန့်အပ်ရာတွင် ဆရာဖြစ်လက်မှတ်ကဲ့သို့သော သင်ပြမှုဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်မျိုးကို လျှောက်ထားတောင်းခံနေရန် မလိုတော့ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသား နည်းပြဆရာများအတွက် လစာ ငွေများအပြင်၊ ကျောင်းဝင်ကြေး၊ လစဉ်ကြေးများကိုလည်း မိမိတို့ ဆန္ဒ သဘောအလျောက် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပေသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေးမူဝါဒလမ်းစဉ်များကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဤ ဆီတာရာ (SETARA) ၏ စစ်တမ်းကို အခြေခံမူတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စီမံကိန်း (၁၀) ခု ရေးဆွဲရာ၌လည်း ဝန်ကြီးချူပ် ဒါတွတ် ဆရီနာဂျစ် တွန်ရာဇတ်က ပြည်သူပိုင် တက္ကသိုလ်များအတွက် အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့ငွေကို ဆီတာရာ၏ မှတ်တမ်းအရ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ပေးအပ်ရမည်ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ သည်။
မာလာကာ တက္ကသိုလ် (UM) ၏ လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကြီး ပါမောက္ခ ဒါတွတ် ဒေါက်တာ ဂေါ့(သ်) ဂျပ်(စ်)မွန်ကလည်း ၎င်း၏ ကျောင်းအဆင့် (၅) ဝင်သည့်အတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးမိကြောင်း ယင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် မိမိတို့ ရောက်ရှိနေသည့် လမ်းကြောင်းအမှန်ကို သိရှိရကြောင်း မိမိတို့ (UM) ကျောင်း၏ လိုအပချက်တစ်ရပ်မှာ အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားရေး တက္ကသိုလ် (၁၀၀) စာရင်းတွင် စံချိန်ဝင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရေးအတွက် ဘဏ္ဍာငွေ လိုအပ်နေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြခံရခြင်းသည် အပြု သဘောဆောင်သော တိုးတက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ရရှိလာသော ဘဏ္ဍာငွေများကိုလည်း အထူး အရေးကြီးလှသည့် ဘာသာရပ်များ ဖြစ်ကြသော ဇီဝဆေးပညာ သိပ္ပံဘာသာရပ် (Biomedical Sciences)၊ ရူပဗေဒနှင့် နာနိုနည်းပညာဗေဒ (Nanotechnology) များအတွက် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကျောင်းအဖြစ် Curtin တက္ကသိုလ်အား သတ်မှတ်၍ ယင်းကျောင်းမှ ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီးအား အဆင့်မြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးမှ ဆုချီးမြှင့် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ Curtin တက္ကသိုလ်၏ ပင်မနယ်မြေမှာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ Perth (ပါးသ်) မြို့၌ တည်ရှိပြီး မလေးရှား နိုင်ငံ ဆာရာဝတ်ပြည်နယ် မီရီမြို့ရှိ Curtin တက္ကသိုလ်မှာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ ပင်မ တက္ကသိုလ်၏ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချ၍ ဘွဲ့ဒီဂရီများကို အပ်နှင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းဘွဲ့ဒီဂရီများကို သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများရှိ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသည်။ ထို့သို့ အသိအမှတ်ပြုကြသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ CPA Austrialia, Institute of Certificated Public Accounts, Engineers Australia, Institution of Chemical Engineers, UK တို့ ဖြစ်သည်။
ဆာရာဝတ်ရှိ Curtin တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တက္ကသိုလ် ကထိကများ အမှုထမ်းလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ယင်းတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းလို လျှင် www.curtin.edu.my တွင် လိပ်စာရှာဖွေ၍ မြန်မာဆရာများထံသို့ စာရေးဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။
Posted on June 21, 2011, in ဆောင်းပါးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.